Success Archives • Brand You Academy
LeaveaComment	/ Success / By Htet Yie
၁။ အိုင်ဒီယာကောင်းရှိခြင်း (Good Business Ideas) အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အိုင်ဒီယာကောင်းသူတစ်ယောက် အမြဲလိုလိုရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုရှိပြီး လူတွေကို ချပြချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီနေ့ခေတ်လိုများပြားလှတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ဝယ်သူတွေမြင်အောင်၊ နှစ်သက်သဘောကျအောင်၊ ဝယ်ယူသုံးစွဲချင်အောင်ဆိုရင် ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ စဉ်းစားဖို့လိုသလို သူများထက် ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ အိုင်ဒီယာရှိဖို့လိုပါတယ်။ ၂။ ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း (Creativity) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်မဲ့လူတွေအတွက် အရေးကြီးတာက လုပ်ငန်းကို သူများနဲ့ မတူအောင်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူတွေထက် သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု၊ အိုင်ဒီယာအသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှိနေပြီးသား ပြိုင်ဘက်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်က အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို လူအများကြားထဲ …
“လုပ်ငန်းတစ်ခုကို မစတင်ခင်မှာ သိသင့်တာတွေ” Read More »
LeaveaComment	/ Personal Development, Success / By Dr. Phio Thiha
ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းလောက်က Brand You Academy က သင်တန်းသားဟောင်းတွေအတွက် သီးသန့် Webinar လေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က Building your resilience ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာပါ။ အထူးသဖြင့် ခုလိုအချိန်အခါမှာ တော်တော်များများရဲ့ စိတ်တွေလည်း ထိခိုက်နေချိန်မို့ အဲဒီခေါင်းစဉ်လေး ရွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။စစချင်း သူတို့ကို မေးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝမှာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြချင်တာရှိရင် အားလုံးသိအောင်၊ အားတက်ရအောင် မျှဝေပေးပါ ဆိုတော့ ၃ ယောက်လောက် ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အားလုံးကို အံ့အားသင့်သွားစေသူတစ်ယောက် ပါပါတယ်။ အဲဒီညီမလေးက ချင်းလူမျိုးပါ။ နာမည်လည်း မမှတ်မိသလို၊ ကင်မရာ ပိတ်ထားလို့ သူ့ကိုလည်း မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့အသံနဲ့ သူ ပြောသွားတာတွေကို ခုထိ …
“ဖြတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခရီးမိုင်တွေအတွက် ဂုဏ်ယူပါ” Read More »
Lots of people all around the world love dressing to impress, which is why we, in this article, want to tell you straightaway that you do not have to be enormously rich to look incredible. The first thing you can do is simply avoid making certain common mistakes before going on to experiment and delight …
How to look likeaMillion Dollars even if you aren’taMillionaire Read More »
To successfully gain the upper hand in today’s fiercely competitive market, every element of your professional career and image must be honed to perfection. To help establish your credibility and trust among the people in your field, three main elements are fundamental in order to achieveasuccessful personal image: appearance, behaviour, and communication. In …
What are the Important Elements in Creating A Successful Personal Image?​ Read More »